Semalt विशेषज्ञ १ 13 सरल प्रविधिको सबै सफल व्यापार दिमाग अन्वेषण प्रकट गर्दछ
केही व्यक्तिहरूको लागि सफलता बालुवाको झोला उठाउने जस्तो लाग्न सक्छ, तर केहीको लागि यो केवल दिनचर्या हो। यो कसरी सम्भव छ?
प्रारम्भिक चरण भनेको डरलाई मार्नु हो, जुन असफलताको भावनाबाट आउँदछ, लगातार सोधेर र सही योजना बनाएर। Semalt का अग्रणी ग्राहक सफलता प्रबन्धक, Igor Gamanenko दाबी गर्छन् कि अनुभव को वर्षहरु अनमोल छ किनकि तिनीहरूले धेरै परियोजनाहरु को साकार गर्न योगदान दिएका छन्। यहाँ व्यापार मा सफल हुन के गर्न तेह्र सल्लाहहरु छन्, कि विशेषज्ञ Semalt मा उत्पादक कार्य अभ्यास को अनुभव मा ड्राइंग साझा।
तपाईं विचार चरण देखि अन्तिम कार्यान्वयन र अनुगमन को लागी के प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ को एक ठूलो तस्वीर हुनुपर्दछ। एकै साथ, यो तपाईलाई संलग्न गर्न चाहेको व्यक्तिको संख्या, टेक्नोलोजी जुन तपाईले रोजगार लिने योजना बनाउनु भएको छ, गाडी जसले दुबै व्यक्ति र प्रविधि लाई सम्बोधन गर्न अनुमति दिन्छ भनेर बुझ्न आवश्यक छ। लक्षित ग्राहकहरू परिभाषित गर्नुहोस्, नियामक प्राधिकरण र मूल्य बेन्चमार्क जसले नाफाको ग्यारेन्टी गर्नेछ वा कम्तिमा केही समयको लागि पहललाई निरन्तरता दिनेछ जब सम्म तपाईं पछाडि र पछि परेन।
तपाइँले विचार म्यापि withको साथ काम सके पछि, तपाइँको विचारको सबै फरक पक्षहरूको विस्तृत योजना तयार हुन्छ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण बाट कम्तिमा सबै लागत निहित समान रूपमा आइटममा हुनु पर्छ। यस कठोर प्रक्रियाको सार यो छ कि यो तपाइँको लक्ष्य हासिल गर्न को लागी कुन समय ले अवधारणाको समयमा अस्पष्ट अभिव्यक्त गरिएको थियो राम्रो समय अनुमान गर्न को लागी हो।
अवश्य पनि, तपाइँलाई जानकारीको केहि विशिष्ट प्रकारको साथ परिचित हुनुपर्दछ, तर त्यो तपाइँको सफलताको ग्यारेन्टी गर्न पर्याप्त छैन। तसर्थ, गहन अनुसन्धानको आवश्यकता अपरिहार्य छ किनकि केही तथ्यहरू तपाईंलाई खुला रूपमा खोल्न नसक्ने हुन सक्छ वा चीजहरू बिभिन्न भयो, र तपाईंले यो जान्नु आवश्यक छ। फेरी, तपाईलाई चाहिएको जानकारीमा निर्भर गर्दै, जानकारीको ऐलिटिंग उचित ढ should्गले गरिनु पर्छ। अन्तमा, सहि सूचना एकदम महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाईं गलत मार्गमा श्रोतहरू खेर फाल्नुहुन्न।
जानकारी प्रमाणित गर्नुहोस्
तपाइँले पाउनु भएको जानकारीमा एक सर्वेक्षण गर्नुहोस्, यसको प्रामाणिकता प्रमाणित गर्नुहोस् र यसलाई अवधारणागत लक्ष्यसँग पign्क्तिबद्ध गर्नुहोस् जुन हामीले अघि नै भन्यौं। प्रमाणिकरणको बखत, स्थिरता एकदमै महत्त्वपूर्ण छ जति सक्दो चाँडो यसले गन्नेर गरिएको जानकारीको विश्वसनीयता निम्त्याउँछ।
जब तपाईं सबै जानकारीको साथ आउनु भएको छ, यो चारै तिर हेराउन को लागी केही समय लिने छ र समान वा राम्रो परिणामहरू प्राप्त गर्न केहि शक्तिशाली शक्तिशाली तरिकाहरू छन् कि भनेर हेर्नुहोस्। तपाईं के विचार गर्नुहुन्छ? तपाईं लक्ष ग्राहकहरु वा ग्राहकहरु लाई पहिले विचार, लागत, समय वा संसाधन होईन। ग्राहकको सन्तुष्टिको लागि सबैभन्दा आवश्यक के हो भनेर तपाईंले स्पष्ट गरिसकेपछि, तपाईंले लागत, समय र स्रोतहरूको कारकलाई विचार गर्नुपर्छ र तपाईंको पहलका लागि उत्तम विकल्पहरू छनौट गर्नुपर्नेछ।
अन्तिम योजना कोर्नुहोस्
उपलब्ध विकल्पहरूको विश्लेषणको साथ, अब तपाईले कस्तो रणनीति प्रयोग गर्ने भनेर साहसी अडान लिन सक्नुहुन्छ, जसले सरोकारवालाहरूको चासोलाई प्राथमिकता दिनेछ। तपाईंको सबै विकल्पहरू मध्ये एक ग्राहकको सन्तुष्टि र समयको सन्दर्भमा अलग हुनुपर्छ। यो नबिर्सनुहोस् कि तपाईसँग विद्यमान परिस्थितिहरूको आधारमा बिभिन्न समयमा धेरै रणनीतिहरू प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चीजहरू प्राप्त गर्न पक्कै दिगो परिणामहरू हुन्।
कोष को स्रोत छनौट गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसायको मामला आवश्यक कोषहरू प्राप्त गर्न धेरै हदसम्म महत्वपूर्ण छ। यो पहलका लागि तर्कसंगतको स्पष्ट अभिव्यक्ति हो र सबै विरुद्दहरूको बिरूद्ध एक विशेष रणनीति अपनाउनुको कारण। यो समय र परिष्कृत, सरल र शंकाको स्पष्ट र कुनै पनि प्रकारको अस्पष्टता हुनुपर्दछ। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंले स्रोतहरूको उपयोग गर्नु पर्छ जसले तपाईंको व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्दैन, उदाहरणका लागि उच्च ब्याज दर, लम्बाई र जटिल कानूनी दायित्व, निश्चितताको लागि कडा सर्तहरू। पूंजीको प्यारामेट्रिक लागतमा सँधै कारक गर्नुहोस् जुन सबै प्रकारको जोखिमहरूको लागि खाता दिनेछ र अझै तपाईंको अपेक्षित राजस्व स्ट्रिमको सीमाभित्र पर्नेछ।
तपाईंको योजना अपडेट गर्नुहोस्
यो तपाईंको समय र स्रोतहरूको धेरै कहिले पनि हुने घटनाहरूलाई न्यूनतम पार्दैन जसले घाटा निम्त्याउँदछ। त्यसो भए, केहि समय लिनुहोस् र तपाईंले विगतका दिनहरू, हप्ताहरू र महिनौं सम्म गर्नुभएका सबै समीक्षा गर्नुहोस्। यसलाई वर्षौंदेखि सानो नखोज्नुहोस् तर यदि यो हुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले हार मान्नुभएन वा ढिलाइ गर्नुहोस्। हुनसक्छ, केहि गर्न बिन्दु र क्रसिंग गर्न सकिन्छ। जब तपाईं तिनीहरूलाई फेला पार्नुहुन्छ, समय खेर फाल्नुहोस्, आवश्यक गर्नुहोस् र अर्को चरणको साथ भेट्नुहोस्।
तपाईंको योजना कार्यान्वयन गर्नुहोस्
अब यो रोलिंग र अलि अलि खेल्ने प्राप्त गर्ने समय हो किनकि तपाईंलाई कहिले थाहा छैन के प्रतिक्षामा। यद्यपि "योजना बनाउँदा तपाईंलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा दुई गुणा बढी बचत हुन्छ" भन्ने भनाइ सत्य छ, तर यसले हडबडीको आवश्यकतालाई कहिल्यै जोड दिएन त्यसैले यसलाई ढिलो र स्थिर लिनुहोस्। अन्तमा, योजना गरिएको रणनीति र कार्यान्वयन रणनीति बीचको भिन्नता धेरै संकुचित र नियन्त्रणित हुनेछ भन्ने कुरा देखाउँदै त्यहाँ अप्रत्याशित परिस्थितिहरू छिटो गरी तपाईंलाई पुनः समायोजित गर्न सक्षम गर्दछ।
तपाइँको योजना को निरीक्षण गर्नुहोस्
कुनै सफल व्यवसाय निगरानी र नियन्त्रण बिना जान सक्दैन। त्यो स्थिरता र गुणवत्ता आश्वासनको विशेषता हो। निगरानीको सार यो छ कि चाँडो भन्दा चाँडो सही कदमहरू चाल्नु हो किनभने यो योजनाबाट टाढा टाढा हुन्छ, प्रबन्धन गर्न गाह्रो हुन्छ, र व्यापार बढि महँगो हुन्छ। ब्याकलॉग प्रबन्धनको प्राथमिकता को एक उच्च स्तर शामिल छ; प्रश्न यो छ: कसको ब्याज अर्को प्राथमिकता दिइनेछ? र अर्को कुरा जुन दिमागमा आउँछ त्यो द्वन्द्व हो।
सुधारात्मक कार्यहरू लिनुहोस्
व्यवसायको छवि र प्रतिष्ठा सुरक्षित गर्न आवश्यकता साथै अन्य कारकहरू जस्तै लागत, सन्तुष्टि, र संसाधन अधिकतमकरणले आवश्यक सुधारात्मक कार्यहरूलाई प्रेरित गर्दछ। पुन: कार्य, विचलन र दोष मर्मतका लागि अनुमोदन तोकिएको समय सीमा भित्र गर्नुपर्नेछ जसले सम्पूर्ण व्यापार अवधिलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्दैन।
मानिसहरूलाई तपाईंको व्यवसाय जान्न दिनुहोस्
तपाईंको व्यवसाय प्रमोट गर्नको लागि सोशल मिडिया, मुखको शब्द र सबै अन्य विज्ञापन संयन्त्रहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यसले बिक्रीलाई बढावा दिनेछ र राजस्व बढाउनेछ जबकि लागत बिस्तारै घट्नेछ र लामो समयसम्म नाफा बढ्नेछ।
अन्तमा, निगरानी गर्न बन्द नगर्नुहोस् किनभने व्यापार विश्व धेरै गतिशील हो जहाँ परिवर्तनहरू अपरिहार्य छन्। सक्रिय हुनुहोस्, सिक्नुहोस्, र ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्नुहोस्। विकास र विस्तार स्वाभाविक रूपमा आउँदछ, र सहजताको अवधारणाले तपाईंलाई अग्लो बनाउँदछ।